Falanqaynta Mambo baqbaqaaq, diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo laga fiirsado | War gadget
Falanqaynta Mambo Parrot, oo ah diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo laga fiirsado
Markaad iibsaneyso diyaarad aan lacag badan ku bixin, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka ayaa noqday xulasho aad u caan ah. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waxqabadkoodu liito iyo khibrad duulimaad oo nasiib darro ah ayaa inta badan ku dhacda bogagga iibka ee internetka oo waxaad u maleyneysaa inaadan ka heli karin wax macquul ah qaybtaan, laakiin Baqbaqlaha wuxuu rabay inuu wax kula beddelo diyaaraddiisa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'Mambo drone'.
Baqbaqaaq Mambo waa magaca diyaaraddan yar ee aan duuliyaha lahayn oo leh astaamo aad u heer sare ah Haddii aan isbarbar dhig ku samayno diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la midka ah, in kastoo ay iska cadahay inay sidaas ku samaynayso qiimo ka sarreeya kuwan oo haddana ku sii jiraya inta u dhexeysa qof doonaya inuu baashaal rabaa uu diyaar u yahay inuu bixiyo. Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah diyaaradaha ugu yar ee yaryar ee drones-ka ee suuqa yaalla.
Iyada oo cabirkeedu yahay 18 × 18 iyo kaliya 63 garaam oo culeys ah, waa diyaarad ku habboon isticmaalka gudaha. Maqnaanshaha aaladda kontoroolka (oo loo iibiyey ikhtiyaar ahaan) waxay ka dhigan tahay in aaladaha moobiillada, kuwa casriga ah iyo kuwa kiniinnada ah, ay tahay in loo isticmaalo ku shaqeynta. mahadsanid barnaamijka Freeflight Mini, ee ku habboon aaladaha macruufka y Android iyo gebi ahaanba bilaash ah. Xidhiidhka Bluetooth 4.0 waa midka u oggolaanaya isku xirnaanta taleefannada casriga ah oo leh illaa 20 mitir.
Batarigu wuxuu soconayaa ilaa 9 daqiiqo haddii aynaan isticmaalin qalabka ka dhigaya Mambo wax gaar ah: madfac balaastig ah oo caag ah iyo toobiyeyaal korka la saarayo taasna waxay ka dhigeysaa mid ku habboon carruurta yaryar (oo aan aad u yareyn) guri. Nus saac gudahood ayaan dib uga buuxin doonnaa batteriga, taas oo aan fiicnayn laakiin helitaanka batteri dheeraad ah waxay noqoneysaa mid muhiim ah si aad ugu raaxaysato diyaaradan yar. Kamarad 0,3 Mpx iyo dareemayaal dhammaan noocyada (accelerometer, gyroscope, barometer, sensor inertial iyo baroscopic) ayaa dhameystira faahfaahinta.
Baqbaqaaqdan Mambo waa diyaarad ku habboon kuwa ku cusub adduunkan, dhab ahaantii fudeydkeedu wuxuu ka dhigayaa mid aan lagula talinayn qof kasta oo raadinaya wax aad u horumarsan. Soo degida iyo ka degida waa suurtagal taabashada badhanka shaashadda, iyo ilaa wuxuu leeyahay xakameyn dherer otomaatig ah iyo xasilloonida ay ka masayrto drones badan oo nooca sare ahKaliya waa inaad ka walwashaa inaad ku dhaqaaqdo iyada oo aanad la dhicin caqabadaha. Mid ka mid ah hoos u dhaca yar ayaa ah in uu jiro dib udhac udhaxeeya amarradaada iyo jawaabta drone-ka oo aan raaxo laheyn marka hore laakiin aad si dhaqso leh ulaqabsato oo aad barato inaad magdhow bixiso. Maaddaama ay ku yiraahdaan buro xakamaynta (ikhtiyaari) tan waa la xalliyaa oo maaraynta ayaa aad u sax ah.
Diyaaraddan yar yar ee loo yaqaan 'drone-ka' xitaa waxay leedahay suurtagalnimada inay ka duusho gacantaada adoo kor ugu soo qaadaya haddii aad jeceshahay pirouettes waad sameyn kartaa iyaga oo kaliya adigoo riixaya badhanka shaashadda taleefankaaga casriga ah. Kontaroolada ayaa loo habeyn karaa kakanaanta weynXitaa waad kordhin kartaa xawaaraha dhaqdhaqaaqa kuwa doonaya dhibaatooyin badan, laakiin had iyo jeer maskaxda ku hay in aysan ahayn diyaarad loo adeegsado kuwa horumarsan, ka fog. Dabcan, maaraynta banaanka way dhib badan tahay isla marka ay dabeyl dhacdo, lumiso xasiloonida lagu yaqaan.
Baqbaqaaqda Mambo ma aha oo keliya mid gaar ah maxaa yeelay waxay leedahay tiknoolajiyad ka badan tii laga filaayay diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ah, laakiin sidoo kale waxaa ku jira aalado asal ah oo asal ah: foosto iyo tweezers. Iyagu waa laba ciyaarood oo yaryar oo xagga sare ku dheggan ilbiriqsiyo gudahood oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato wax ka duwan intaad si fudud u duulayso Ku toogashada kubbadaha balaastigga ah diyaarad aan duuliye lahayn waa wax aan qiimo ku fadhiyin cunug toban jir ahXitaa qof qaangaar ah, isku dayaya inuu wax ku soo qaato tuubbooyinka waa wax aan macquul ahayn laakiin waa baashaal.
Dabcan, ha fileynin in qalabka lagu rakibo diyaaradda oo la adeegsado, batteriga ayaa kugu soo gaari doona 9 daqiiqo gudahood, aad uga fog. Nasiib wanaag, isla marka batteriga dhammaado, labada leyl ee hore ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa casaan waxayna si nabad ah u degtaa. Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato batteriga haray wakhti kasta.
Qalab kale oo ah Baqbaqaaqa Mambo uu leeyahay oo mar horeba jidhkiisa lagu dhex daray waa kaameradda. Kaliya waa sheeko-xariir, maxaa yeelay midkoodna booskiisa ama tayadiisa midna nooma oggola inaan wax badan qabanno. Waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad qaadatid qabashada zenith iyo tayo aad u hooseeya, maaddaama 0,3 Mpx aysan siinin wax badan. Helitaanka sawir aan mugdi lahayn ama aan lahayn buuq way adag tahay, in kasta oo lagu guuleystay. Iyada oo ay taasi jirto, waxaad ka heli kartaa qabashada qosolka badan gudaha, marka laga eego aragti aadan inta badan arkin.
Iyada oo la adeegsanayo xasiloonida iyo xasilloonida ka sarreysa celceliska moodooyinka ugu badan ee qaybteeda, diyaaradda nooca loo yaqaan 'Parrot mini drone' ayaa ku habboon kuwa doonaya inay ku bilaabaan aaladda noocan ah ama hadiyad ahaan. Cunug kasta oo ka weyn da'da toban sano wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si habsami leh ugu maareeyo ficil yar isagoo aan ka walwalin daacadnimadiisa. Qiimaha ugu dhow € 99 gudaha Amazon Waa iibsi aad loogu taliyay kuwa doonaya inay adduunkan ka bilaabaan ama hadiyad fiican u sameeyaan.
Aad u deggan oo sahlan in la maareeyo
Laga xakameyn karo taleefanka casriga ah iyo kaniiniga
Qalabka wanaagsan iyo qaabeynta
Ku habboon gudaha
Foosto iyo haysa madadaalo dheeraad ah
Xakamaynta adag ee banaanka oo leh dabayl
Kaamiro tayo yar
Dib u dhac yar oo ku yimaada kontaroolada
Ku dhowaad ayaa lagu qasbay batari labaad
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Falanqaynta Mambo Parrot, oo ah diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo laga fiirsado
CCleaner wuxuu ku dhacay Trojan, cusbooneysii hadda si aad uga saarto